सुशान्तकी गर्लफ्रेण्ड रिया चक्रवर्ती बेपत्ता ! - Prathana Media
सुशान्तकी गर्लफ्रेण्ड रिया चक्रवर्ती बेपत्ता !
प्रार्थना मिडिया	 Publish Date Aug 1, 2020
दिवंगत बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतकी गर्लफ्रेण्ड रिया चक्रवर्ती बेप त्ता भएकी छिन् । सुशान्तको मृ त्युको विषयमा बिहार पुलिसले गरिरहेको अनुसन्धानको क्रममा अहम प्रमाण प्राप्त भएसँगै रिया बेपत्ता भएकी हुन् । पुलिसले रियाको मोवाइलमा पनि सम्पर्क गर्न सकिरहेको छैन । सूत्रको हवाला दिँदै दैनिक जागरण अखबारले लेखेअनुसार पुलिसले रियावि रुद्ध लुकआउट नोटिस जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
पुलिससँग सोध्ने प्रश्नको सूची तयार छ । रिया बेपत्ता छिन्, उनको फोन अफ छ । शुक्रबार पनि पुलिसको टिम रियाको घर गएको थियो तर उनी घरमा थिइनन्
यही बीचमा जाँचको लागि मुम्बइ गएको बिहार पुलिसको टिमलाई मुम्बइ पुलिसले गरेको असहयोगको विषयमा रणनीति तय गर्न बिहारका डिजीपी गुप्तेश्वर पाण्डेले बैठक गरेका छन् । बैठकपछि डिजीपी पाण्डेले महाराष्ट्रका डिजीपीलाई फोन गरेर यस विषयमा सहयोग मागेका छन् ।
बिहार पुलिको एसआइटीले रियालाई सोधपुछको लागि खोजिरहेको छ । पुलिससँग सोध्ने प्रश्नको सूची तयार छ । रिया बेपत्ता छिन्, उनको फोन अफ छ । शुक्रबार पनि पुलिसको टिम रियाको घर गएको थियो तर उनी घरमा थिइनन् । रिया यसरी अचानक बे पत्ता हुँदा सुशान्तको मृ त्युमा उनको हात हुन सक्ने आशंकालाई बल पुगेको छ ।
अभिनेत्री रजनी केसी रातो ड्रेसमा देखिइन् बोल्ड (फाेटाेफिचर)
प्रदेश २ का मन्त्री यादवलाई कोरोना पुष्टि, बालुवाटारमा विशिष्टहरुलाई भेटेको तथ्य…
शिशुलाई ६ महिनासम्म आमाकै दूध चुसाउनुकाे कारण यस्ताे छ
यी बलिउड ४ सेलिब्रेटि, जाे चढ्छन् यति महंगाे कार
आजको राशिफल: यी ६ राशिका लागि अशुभ
सबै भन्दा धेरै सन्तान भएका बलिउड नायक (फाेटाेफिचर)
कयौं दुश्मन बनाएका सलमान खानको ७ मिल्ने साथी
बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनीको १० लाख लाइक पाएका यी तस्बिर (फोटो-फिचर)
प्रदेश २ का मन्त्री यादवलाई कोरोना पुष्टि, बालुवाटारमा…
ब्रा खोलेर मात्र समाचार पढ्ने यस्तो टेलिभिजन च्यानल…